Momba anay - Hebei Boyu Biotechnology Co., Ltd.
Hebei Boyu Biotechnology CO., Ltd.dia miorina ao amin'ny Xinle Industrial Park, faritanin'i Hebei, izay mifanila amin'ny làlambe Beijing-Hong Kong-Macao, làlambe Xinyuan, làlam-pirenena G107 ary ny làlambe avaratry ny S203, misy toerana fitaterana tena mety.
Ny orinasa dia naorina tamin'ny 8 septambra 2015 ary napetraka tamin'ny 13 jolay 2016. Orinasa teknolojia avo lenta maoderina miorina amin'ny R&D ary tarihin'ny fampandrosoana maharitra. Ny tombony lehibe dia mifantoka amin'ny famokarana sy ny varotra vokatra asidra amine.
Ny orinasanay dia manarona faritra mihoatra ny 50.000 metatra toradroa. Izy io dia manana atrikasa manara-penitra GMP sy fitaovana enti-mandinika sy manandramana andrana ary mahomby ary nametraka rafitra fitantanana kalitao sy henjana.
Ny fanavaozana ara-tsiansa sy ara-teknolojia no zava-dehibe amin'ny fampivoarana sy ny fanatsarana ny vokatra ary ny vato fehizoron'ny fifaninanana sy ny fampandrosoana ny orinasa.Boyu tsy vitan'ny ekipa R&D azy manokana, ivon-toerana R&D sy foibe famokarana, fa na dia nametraka fifandraisana fiaraha-miasa amin'ny Tianjin Nankai University Hebei University aza. momba ny siansa sy ny haitao. Ary andrim-panjakana anatiny sy departemanta fikarohana hafa, izay efa nanolo-tena hatry ny ela tamin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny vokatra asidra amino, ny fizotrany ary ny teknolojia. Ny kalitaon'ny vokatra dia mahazo fanatsarana mitohy miaraka amin'ny fanohanan'ny fikarohana ara-teknika matanjaka sy ny fampandrosoana, ary miaraka amin'ny vokatra tsara kalitao, ny orinasa dia nahazo fampandrosoana haingana.
Ny vokatra lehibe ao anatinay
ampiasaina indrindra amin'ny indostria, sakafo, vokatra fikarakarana ara-pahasalamana, kosmetika, famahanana ary indostrian'ny vokatra asidra amine.
Zezika asidra amino amina rano (vovoka)
Zezika asidra amino amina rano (rano)
Manantena mafy izahay fa hiara-hiasa amin'ireo namana eran'izao tontolo izao ary ho tonga mpiara-miasa sy sakaiza azo itokisana indrindra!
Ny vokatray dia amidy any Eropa, Amerika, Japon, Azia atsimo atsinanana ary faritra sy firenena hafa, ny vokatra isan-karazany sy ny kalitao avo lenta, dia nahazo ny fiderana sy fahatokisan'ny mpanjifanay!
Ny orinasanay no foibem-panohanana lehibe ao amin'ny faritanin'i Hebei, nitsidika ny orinasanay ireo mpitarika ny faritany, manome fahatokisan-tena sy fanohanana bebe kokoa ho an'ny fampandrosoana tsara kokoa!
Hebei Boyu Biotechnology dia hiezaka hanangana "Hebei Boyu" ho marika kilasy voalohany miaraka amina foto-pivoarana siantifika, fisainana R&D vaovao, fomba fitantanana henjana, kalitaon'ny vokatra tsara ary rafi-serivisy marina.
Ny orinasantsika dia manana patanty famoronana mihoatra ny folo. Nahazo mari-pankasitrahana R&D, Rafitra fitantanana kalitao, rafitra fitantanana fahasalamana sy fiarovana amin'ny asa, fanamarinana ara-pahasalamana miozolmana, fanamarinana rafitra fitantanana tontolo iainana, fanamarinana Kosher ary halal ary orinasa mandroso sns.